राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा गएको चार वर्ष पुग्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँले के पाउनुभयो रु सङ्घीय प्रणाली व्यवहारतः लागू भएको ठान्नुहुन्छ ?
प्रदेशले पाएको अधिकारबमोजिम हालसम्म के कति कानून, नियमावली निर्देशिका बन्न सके रु यिनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
प्रदेशस्तरमा बजेट, स्रोतसाधन तथा कर्मचारी परिचालन, प्रदेश प्रहरी गठनलगायत विषयमा केन्द्रले अझै अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्ने प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ भन्ने सुनिन्छ । यस विषयमा केन्द्रले के गरिदिनुप¥यो ?
विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड—१९को सम्भावित जटिल अवस्थाबाट जनतालाई जोगाउन तीन वटै सरकार एकबद्ध भएर लड्नु जरुरी छ । यसका लागि जनता पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।९त